SUPER DOWNLOAD - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
က MS Word document အတွက်မဆိုသင်္ကေတထားရန်လိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိတဲ့အခါ, အားလုံးမဟုတ်အသုံးပြုသူများအဘယ်မှာသူ့ကိုရှာတွေ့မှငါသိ၏။ ပထမဦးဆုံးအရာကြည့်ဤမျှလောက်ပုပ္ပနိမိတ်နှင့်သင်္ကေတများမဟုတ်ပါသောကီးဘုတ်ပေါ်တွင်ကျရောက်ပါတယ်။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့သင်နှုတ်ကပတ်တော်၌မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၏သင်္ကေတထားရန်လိုအပ်ပါတယ်လျှင်လုပ်ဖို့? ဒါဟာမဖြစ်သောကြောင့်သင်ကီးဘုတ်တွင်! ကစာရွက်စာတမ်းပုံနှိပ်ကြောင့်အဘယ်မှာရှိ, ထို့နောက်, သူ့ကိုရှာသလော
သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါသမ်မာကမျြးသုံးပြီးနေတယ်ဆိုရင်, သေချာသည်, အပိုင်းသတိပြုမိကြသည် "သင်္ကေတ"ဘယ် program ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကသူတို့ပြောသကဲ့သို့သင်တို့အားလုံးအခါသမယများအတွက်, ပုပ္ပနိမိတ်နှင့်သင်္ကေတများအမျိုးမျိုးတို့ကိုတစ်ကြီးမားစုဆောင်းမှုရှာတှေ့နိုငျဘယ်မှာပါပဲ။ အဲဒီမှာကျနော်တို့မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၏လက္ခဏာသက်သေကိုရှာပါလိမ့်မယ်။
2. tab ကိုသွားပြီး "ထည့်"။ အုပ်စုမှာကိုကလစ်နှိပ်ပါ "သင်္ကေတ" ကြယ်သီး "သင်္ကေတ".
drop-down menu ကို3ကို select လုပ်ပါ "အခြားဇာတ်ကောင်".
ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်ခုနှစ်တွင် 4. သင်လည်းသင်လိုအပ်သောတဦးတည်းကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာဇာတ်ကောင်များ၏အတော်လေးကြီးမားတဲ့စာရင်းကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
5. မြစ်ဝကျွန်းပေါ် - လျင်မြန်စွာစာရင်းထဲမှာရှာတွေ့ထို့ကြောင့်ဂရိသင်္ကေတဖြစ်တယ်, Drop-down menu ကို၏သင့်လျော်သော set ကို select လုပ်ပါ: "ဂရိနှင့် Coptic အဘိဓါန်ဇာတ်ကောင်".
ဇာတ်ကောင်များ၏စာရင်းများတွင် 6. သင်ကဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာကို "မြစ်ဝကျွန်းပေါ်" ကိုတွေ့လိမ့်မည်နှင့်ကြီးမားသောစာတစ်စောင်နှင့်အသေးစားနဲ့တူရှိပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျခငျြတစာနယ်ဇင်း Choose "ထည့်".
7. စာနယ်ဇင်း "ကိုပိတ်ပြီး" အဆိုပါပေးတဲ့ dialog box ကိုပိတ်လိုက်ပါရန်။
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ၏ 8. သင်္ကေတပြစာရွက်စာတမ်းသို့ထည့်သွင်းပါလိမ့်မည်။
အထူးကုဒ်သုံးပြီး Box ကိုမြစ်ဝကျွန်းပေါ်
အဆိုပါ embedded အစီအစဉ်ကို set ကိုဇာတ်ကောင်အတွက်ကိုယ်စားပြုနီးပါးတိုင်းဇာတ်ကောင်များနှင့်အမှတ်အသားမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ကုဒ်ရှိသည်။ သငျသညျ code ကိုလေ့လာသင်ယူနှင့်အလွတ်ကျက်လျှင်, သင်ပြတင်းပေါက်ဖွင့်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ် "သင်္ကေတ"လက်ျာသည်နိမိတ်လက္ခဏာကိုအဲဒီမှာရှာဖွေပြီးစာရွက်စာတမ်းမှထည့်သွင်းရန်။ ထိုအသေး, မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသကုဒ်ကဒီ window တွင်ရှိနိုင်ပါသည်နိမိတ်လက္ခဏာကိုလေ့လာပါ။
သင်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုမထားချင်ရှိရာတည်နေရာမှာ 1. ရာထူးညွှန်းမြား။
2. ကုဒ်ရိုက်ထည့်ပါ “0394” တစ်ဦးမြို့တော်စာတစ်စောင်ထည့်သွင်းဖို့ကိုးကားခြင်းမရှိဘဲ "မြစ်ဝကျွန်းပေါ်"။ အင်ျဂလိ layout ကိုတစ်ဦးစာလုံးအသေးစာအမျိုးအစားထည့်သွင်းရန် "03B4" အဆိုပါကိုးကားခြင်းမရှိဘဲ။
3. စာနယ်ဇင်း "ALT + X" ကိုcode ကိုပြောင်းမှနိမိတ်လက္ခဏာအတွက်ဝင်ကြ၏။
သင်ခန်းစာ: နှုတ်ကပတ်တော်၌ keyboard shortcuts
အဲဒီကနှုတ်ကပတ်တော်၌မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်မည်မျှလွယ်ကူသည်။ သင်မကြာခဏစာရွက်စာတမ်းများသို့ပုပ္ပနိမိတ်နှင့်သင်္ကေတများအမျိုးမျိုးထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်လာတယ်ဆိုရင်, ပရိုဂရမ်သို့ built သော set ကိုစစျဆေးဖို့သေချာပါစေ။ လိုအပ်လျှင်သင်ကိုယ်သင်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ် codes တွေကိုအများဆုံးမကြာခဏရှာဖွေအချိန်ဖြုန်းဖို့လျင်မြန်စွာနှင့်မသူတို့ကိုရိုက်ထည့်ရန်သင်္ကေတကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
ဗီဒီယို Watch: Forza6Wheelie build. 1969 Nova Super Sport How To MakeaWheelie Car in Forza6(နိုဝင်ဘာလ 2019).